dayniile » Jeneraal C/naasir Maxamuud Indha Qarshe Oo ah Taliyaha Ciidanka Ilaalinta Deeganka ayaa ku kacay Musuq-Maasuq
Jeneraal C/naasir Maxamuud Indha Qarshe Oo ah Taliyaha Ciidanka Ilaalinta Deeganka ayaa ku kacay Musuq-Maasuq
Waxaan Helnay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegeyn in Ciidamada ilaalada Deegaanka ay ka jirto Musuq Maasuq iyo Qabyaalad iyo Hagar daamo lagu haayo Shaqadi loo igmaday Ciidanka ilaalinta Deegaanka kaas oo Hormuud ka yahay Jeneraal C/naasir Maxamuud Indho Qorshe.
Sida aan ognahay Gobalka Banaadir Tan iyo Bururki uu soo maray Xaalado kala duwan waxaana soo maamula dhowr Gudoomiye iskuna ah duq Magaalo waxaana jira Ciidama hoos yimaado Gobalka qaarna Duwa magaalada ayee hoostagaan.
Hase ahaate waxaa jira Ciidan Loo yaqaano Ciidanka Degaanka Waxayna Hoostagaan Duqa Muqdishu inkastoo Dowlada dhexe ay magacaawdo Xilka Gudoomiyaha Gobalka Banaadir ahne Duqa Moqdishu waxaa la waayey la Xisaabtan lala xisaabtamo Ciidanka Deegaanka ayagoo aan gudan shaqada ay lahaayeen sidoo kale waxaa jira in Taliyaha Ugu sareeyo Ciidanka Deegaanka waxaa jerenaal looga dhigo hal beel qaasatan jufo ka mid ah beesha waceysle .
Kadib bururkii Dowladii Mohamed Siyad bare 1991 waxaa xiligaas Generaal ka ahaa General Dahir Siyaad Wehliye kaas ugu danbeyn dilay Askari katirsanaa Ciidamada Deegaanka jeneraalkaas wuxuna kasoo jeeday beesha waceysle kadib dowladii kacaabka waxaa la soconaa in dowladii Abdi Qaasim laso dhisay Nasiib wanaag waxaa dhacday in markale loo magacaabo Taliyaha Ciidanka Deegaanka Gaashaanle: Cali Cosobow Calasow.
Ka dib Sanado badan waxaa dhacday in Xilka laga qaado sanadkii 2006 hase ahate Xiligii Dowladii Abdulahi Yusuf Axmed ayaa waxaa nasiib u yeeshay in loo magacaabo Gashaanle Sare Axmed Xuseen Mahadi Oo hada ku xigeenka ka ah Ciidanka Ilaalinta Degaanka asiga wuxu kasoo jeedaa beesha Abgaal qaasatan Wacbuudhan Gaar ahaan Maxamed Muuse waxana lagu tilmaami karaa in xiligaas ay cusleyd in jaga ciidan la qabto amni xumi darteyd.
Dowladii Xasan shiekh maxamuud waxaa xilka laga qaaday Gashaanle Axmed Xuseen Mahadi waxaana lagu badalay Sanadki 2013 Nin ay qaraabo dhaw ahaayeen Madaxweynaha Xilka haaye waqtigaas Xasan shiekh waxaana loo Magacaabay Jeneraal C/naasir Maxamuud hada wali xilka sidiisa u haayo waxayna mushaar ahaan u qaatan 2000 Dollar waxaa qaato Generaal Indho qarshe halke ku xigiinkiisa uu qaato 1000 Dollar wana lacago aysan qaadan Ciidamada ka tirsan ee darjooyinka heesta.
Waxaa la yaab ah in ay jiraan Rag badan oo ka tirsan Ciidanka Iaalinta Deegaanka in mudo ah soo shaqeenayeen ayagoo kala heesta darajooyin kala duwan waxaan lagu sameeye Bahdil shaqo iyo Nin jecleesi waxaana hubanti ah in Raga qaarkood aysan howl gali karin musharaadka ay xaqa u lahaayeen aan lasiin waxaana sababtaas leh Gudoomoyaha Gobalka Banaadir ahne Duqa Muqdishu oo shaqdiisa kale iska wata waxayna taasi dhalisay in jagadaas mar waliba loo magacaabo hal jufo ama beel kaliya.
Ciidaanka deegaanka waxaa leeyiihin Gudi lagu magacaabo Gudiga Dishibiliinka waxayna ka kooban yihiin 7 Xubnood waxayna kasoo jeedaab Todobadaas Xubin hal beel oo ah Abgaal taasina waxay ka mid tahay Musuq-Maasuqa ka jira ee uu ku dhaqmayo.
Janaraal Indho qorsho iyo Ku Xigeenkiisa Sidoo kale Gudiga Ayaa waxaa la siiyaa lacag aysan xaq u laheyn oo cadadkeydu yahay 12000 milyan oo shilin Soomaali ah halke Ciidamada Drajada heesta ee Gashaale sare iyo Gashaanle dhexe iyo Kabtan iyo ciidanka kale waxay qaatan Lacag 5280 Shilin Soomaliya waana labuu jibaar lacagta ay qaataan Gudiga iska magacaaban oo wax shaqo ah qabanin waana Masuq uusan ka warqabin Duqa Muqdishu.
Dhinaca kale Tirada Ciidanka U qoran Gobalka Banaadir waxaa lagu sheegay 980 Ciidan waana Tiro Aad ubadan Hase ahaate aan Sida saxda loo tiri koobin taasina shaqdeyda waxaa leh Duqa Muwdisho waxaana la ogyahay Ciidankaas Qoran intoo badan wa hal beel marki laga reebo 85 qof wax aan dhameyn.
Shaqada ay leeyihiin Ciidamada Ilaalada Deegaanka waxay kala tahay.
-Uruurinta Shatiga ,Canshuuraha Guryaha
-Fasaxa Dhismaha oo ka kooban qeybo badan Sida
1. Shaqo biloow
4. Qaab dhismeedka Guriga
– Roondada Deegaanka
Waxaa jiro shaqooyin badan oo dowlada hoose wax weyn uga badali laheyd Amni Xumida ka jira Magalaada muqdishu qaastan Habeenki waxaana la soconaa in Hoteelada iyo meelaha lagu nasto xiliyada danbo ay shaqdooda tahay in Roondo ku sameeyaan wax waliba fal danbiyeed keeni karo ay qabaan.
Ugu danbeyn Dowlada hoose waxaa muhiim ah in ay Tixraac iyo dabagal sameyso si ay u ogaato dhibka iyo shaqo xumida ka jjrto ciidanka ilaalinta deegaanka waxaana lama huraan ah in la ilaaliyo xaquuqda Ciidanka ka tirsan Ciidanka ilaalada degeenka waxaana muuqata Rag Darajooyin heesta in ay magalaada iska wareegaan ayagoo lagu soo ceyriyey Shaqdoodi islamarkasne laga dhigay Howlgab Waxaana ka imaan karto in La waayo Ciidan leh tayo iyo ahmiyad wadanimo hadii uu sidaan kusii haayo Taliyaha .C/naasir Maxamuud Indho Qarshe.